နံနကျစာအတှကျ သငျ့ကလေးကို မကြှေးသငျ့တဲ့ အစားအစာ(၄)မြိုး
Home Child Nutrition နံနကျစာအတှကျ သငျ့ကလေးကို မကြှေးသငျ့တဲ့ အစားအစာ(၄)မြိုး
နံနကျစာဟာ တဈနတေ့ာရဲ့ အရေးပါဆုံးသော အစားအစာဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကလေးတှအေတှကျ ပိုပွီးအရေးပါပါတယျ။ သို့သျောလညျး သငျ့ကလေးတှကေို ကနျြးမာသနျစှမျးစှာကွီးပွငျးစခေငျြတယျဆိုရငျ ရှောငျတာအကောငျးဆုံးဖွဈတဲ့ အစားအစာတခြို့ရှိပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးမှာ ကြှနျတျောတို့ဟာ နံနကျစာအတှကျ သငျ့ကလေးကို မကြှေးသငျ့တဲ့အစားအစာ တဈခြို့ကို ဖျောပွပေးပါမယျ။
သဈသီးဖြျောရညျကို အမြားကွီးသောကျလြှငျ သငျ့အစာအိမျနံရံ အခြှဲမွှေးကိုနာကငျြစနေိုငျပါတယျ။ သူတို့က hydrochloric acid အလှနျအကြှံထုတျလုပျခွငျးကိုလညျး ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ ဒီဖြျောရညျအမြိုးအစားမြားက သငျ့အသားအရကေို နရေောငျခွညျကနေ ပိုပွီး sensitive ဖွဈစတေဲ့ psoralens နဲ့ furanocoumarins တို့လိုပေါငျးစပျပစ်စညျးတှေ ကွှယျဝပါတယျ။
၂။ လတျလတျဆတျဆတျ သဈသီးမြားနှငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား
လတျဆတျတဲ့သဈသီးမြားနှငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားက ကနျြးမာရေးအတှကျ အလှနျကောငျးသျောလညျး သူတို့ကို မနကျစာအတှကျ စားဖို့ အကွံမပွုပါဘူး။ အစာအိမျထဲမှာ ဘာမှမရှိရငျ အကျဆဈဓါတျပါဝငျတဲ့ အစားအစာတှကေို မစားဖို့သတိရပါ။ ဥပမာ- ခရမျးခဉျြသီးမြားမှာ pectin နဲ့ tannic acid ပမာဏ မြားပွားစှာ ပါဝငျပါတယျ။ ဒါက အစာအိမျအနာကို ဖွဈပှားစနေိုငျပါတယျ။
အစားထိုးရှေးခယျြစရာအဖွဈ ကောငျးမှနျတဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ soup ကိုရှေးခယျြပါ။ ဒါက ရငျပူတာ သို့မဟုတျ တနတေ့ာလုံး gas တှကေို ဖွဈပျေါစမှော မဟုတျပါဘူး။
၃။ နို့နဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ အစားအစာကိုစားဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျမဟုတျပါဘူး
အမြားစုက မနကျစာအဖွဈ နို့သောကျသုံးလရှေိ့ကွပါတယျ။ နှားနို့သောကျတာက ကလေးတှကေို toxic မဖွဈစပေမေယျ့ နံနကျစာအတှကျ သူတို့ရဲ့ ဂုဏျသတ်တိက ထိရောကျမှုရှိမှာမဟုတျပါဘူး။
ဗိုကျထဲမှာ အစာမရှိရငျ နှားနို့ကိုမသောကျသငျ့ပါဘူး။ အကာငျးဆုံးကတော့ မနကျစာစားပွီး နာရီဝကျလောကျနမှေ သောကျပေးတာဖွဈပါတယျ။ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ မနကျစာအတှကျ အကောငျးဆုံးရှေးခယျြစရာကတော့ ဘလူးဘယျရီဖြျောရညျဖွဈပါတယျ။ blueberry juice မှာ ဗီတာမငျ C,A,Eနှငျ့ Kတို့ပါဝငျပွီး Complex vitamins B ပမာဏ သုံးပုံတဈပုံခနျ့ရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပိုတတျစီယမျ၊ ဖော့စဖောရကျ နှငျ့ ကယျလစီယမျကဲ့သို့ microelements အရငျးအမွဈမြားစှာ ရှိပါတယျ။
၄။ ကာဗိုဟိုကျဒရိတျကွှယျဝတဲ့ အစားအစာမြား
ပေါငျမုနျ့ကဲ့သို့ ကာဘိုဟိုကျဒရိတျကွှယျဝတဲ့ အစားအစာမြားက သှေး သကွားဓါတျကို မွငျ့တတျစပေါတယျ။ ပနျကရိယကို ပိုအလုပျလုပျစပွေီး အငျဆူလငျပမာဏ အမြားကွီး ထုတျလုပျပေးပါတယျ။ ဒီရလဒျက အငျဆူလငျပိုလြှံမှုကို ဖွဈစနေိုငျပွီး အဆီတှေ ပိုပွီးစုစပေါတယျ။
အကွံပွုခကျြအနနေဲ့ အိမျမှာ သငျ့ကလေးကို မနကျစာကြှေးဖို့ စဉျးစားတဲ့အခါ အာဟာရမြှမြှတတ ကြှေးဖို့က အရေးကွီးပါတယျ။ မနကျစာအဖွဈ ထမငျးကိုအဓိကထားကြှေးတာက ပိုကောငျးပါတယျ။
နံနက်စာအတွက် သင့်ကလေးကို မကျွေးသင့်တဲ့ အစားအစာ(၄)မျိုး
နံနက်စာဟာ တစ်နေ့တာရဲ့ အရေးပါဆုံးသော အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေအတွက် ပိုပြီးအရေးပါပါတယ်။ သို့သော်လည်း သင့်ကလေးတွေကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစွာကြီးပြင်းစေချင်တယ်ဆိုရင် ရှောင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ အစားအစာတချို့ရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ နံနက်စာအတွက် သင့်ကလေးကို မကျွေးသင့်တဲ့အစားအစာ တစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။
သစ်သီးဖျော်ရည်ကို အများကြီးသောက်လျှင် သင့်အစာအိမ်နံရံ အချွဲမြှေးကိုနာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က hydrochloric acid အလွန်အကျွံထုတ်လုပ်ခြင်းကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖျော်ရည်အမျိုးအစားများက သင့်အသားအရေကို နေရောင်ခြည်ကနေ ပိုပြီး sensitive ဖြစ်စေတဲ့ psoralens နဲ့ furanocoumarins တို့လိုပေါင်းစပ်ပစ္စည်းတွေ ကြွယ်ဝပါတယ်။
၂။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
လတ်ဆတ်တဲ့သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များက ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်ကောင်းသော်လည်း သူတို့ကို မနက်စာအတွက် စားဖို့ အကြံမပြုပါဘူး။ အစာအိမ်ထဲမှာ ဘာမှမရှိရင် အက်ဆစ်ဓါတ်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို မစားဖို့သတိရပါ။ ဥပမာ- ခရမ်းချဉ်သီးများမှာ pectin နဲ့ tannic acid ပမာဏ များပြားစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါက အစာအိမ်အနာကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။
အစားထိုးရွေးချယ်စရာအဖြစ် ကောင်းမွန်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် soup ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါက ရင်ပူတာ သို့မဟုတ် တနေ့တာလုံး gas တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၃။ နို့နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစားအစာကိုစားဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်မဟုတ်ပါဘူး
အများစုက မနက်စာအဖြစ် နို့သောက်သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ နွားနို့သောက်တာက ကလေးတွေကို toxic မဖြစ်စေပေမယ့် နံနက်စာအတွက် သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိက ထိရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဗိုက်ထဲမှာ အစာမရှိရင် နွားနို့ကိုမသောက်သင့်ပါဘူး။ အကာင်းဆုံးကတော့ မနက်စာစားပြီး နာရီဝက်လောက်နေမှ သောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မနက်စာအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာကတော့ ဘလူးဘယ်ရီဖျော်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ blueberry juice မှာ ဗီတာမင် C,A,Eနှင့် Kတို့ပါဝင်ပြီး Complex vitamins B ပမာဏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပိုတတ်စီယမ်၊ ဖော့စဖောရက် နှင့် ကယ်လစီယမ်ကဲ့သို့ microelements အရင်းအမြစ်များစွာ ရှိပါတယ်။
၄။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများ
ပေါင်မုန့်ကဲ့သို့ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများက သွေး သကြားဓါတ်ကို မြင့်တတ်စေပါတယ်။ ပန်ကရိယကို ပိုအလုပ်လုပ်စေပြီး အင်ဆူလင်ပမာဏ အများကြီး ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီရလဒ်က အင်ဆူလင်ပိုလျှံမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အဆီတွေ ပိုပြီးစုစေပါတယ်။
အကြံပြုချက်အနေနဲ့ အိမ်မှာ သင့်ကလေးကို မနက်စာကျွေးဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ အာဟာရမျှမျှတတ ကျွေးဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ မနက်စာအဖြစ် ထမင်းကိုအဓိကထားကျွေးတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
Previous articleသငျ့ကလေးကို လမျးပြောကျခဲ့ရငျ ဘာလုပျရမလဲဆိုတာကို သိစဖေို့ ဘယျလိုသငျပေးမလဲ?
Next articleသငျ့ကလေးက တဈယောကျယောကျကို ကိုကျတဲ့အခါ ဘယျလိုတုံ့ပွနျမလဲ?
ကလေးတှကေို အစားအသောကျနဲ့ပတျသကျပွီး မိဘတှလေုပျမိတတျသောအမှားမြား
၆လမှ ၃နှဈအထိ ကလေးတှအေတှကျ ကနျြးမာသော အစားအစာအုပျစု (၅)မြိုး